नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पद धरापमा, के गर्लान अब ? - News20 Media
नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पद धरापमा, के गर्लान अब ?
May 30, 2021 N20LeaveaComment on नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पद धरापमा, के गर्लान अब ?
नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलगायत एमालेका यी ११ नेताको पद धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटीको बैठकले स्पष्टीकरण नदिने १२ जनालाई कारवाहीको तयारी गरेको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएका विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडाले जवाफ दिएका छैनन्।
उनीमाथि कारवाही हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक छलफल तथा समसामयिक विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठक सकिएको छ । आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक केहीबेरअघि सकिएको हो ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्न लागिएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । अस्ति शुक्रवार पहिलो सुनुवाइ भएका मुद्दाहरुमा बहस नसकिएकाले आज फेरि बहस हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
अस्ति शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक​ इजलासबारे अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएकाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने अधिवक्ताहरुको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसद नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर भएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेरलाई अधिवक्ता शम्भु थापाको निर्देशन:’तपाईं बिदामा बस्नुस’!
प्रधानन्यायाधीश राणाको यस्तो खुलासा, कतिबेला आउँदैछ फैसला ?
नेपाली सेनाले देशको नेतृत्व लिन सक्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानसेनापति थापाले दिए यस्तो जवाफ !
June 7, 2021 June 7, 2021 N20
माधव नेपालले ओलीको विपक्षमा मत हाल्न ह्विप दिईसकेको खुलासा ! यस्तो छ वैशाख २७ को तयारी
May 7, 2021 May 7, 2021 N20
एमालेको महासचिवमा योगेश, माधव पक्षका अरु ३ सांसद पनि ओली क्याममा फिर्ता, को को ?
June 4, 2021 N20